State of emergency: Noraran'i Japon ny mpijery rehetra amin'ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Japon » State of emergency: Noraran'i Japon ny mpijery rehetra amin'ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Japon • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Sports • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Minisitry ny Lalao Olaimpika ao Japon Tamayo Marukawa
Tsy avela hanatrika ny Lalao Olaimpika Tokyo amin'ny 2020 ny mpijery noho ny fiakaran'ny tsimokaretina COVID-19 any Japon.
Nilaozana ireo drafitra hamelana ny mpijery vitsivitsy hanatrika ny Lalao Olaimpika Tokyo amin'ny taona 2020.
Ny filoham-pirenena Tokyo 2020 Seiko Hashimoto dia nifona tamin'ny tompon'ny tapakila ary nilaza fa “manenina” ny fanamelohana ny vahoaka rehetra.
Tokyo dia nitatitra ny isa avo indrindra amin'ny COVID-19 isan'andro hatramin'ny tapaky ny volana Mey ny alarobia.
Nanambara ny minisitry ny Lalao Olaimpika Japoney Tamayo Marukawa fa mikasa ny hamela ny mpijery vitsivitsy hanatrika izany Lalao Olaimpika Tokyo 2020 dia nilaozana roa herinandro monja talohan'ny nanombohan'ny hetsika.
Tsy avela hanatrika ny Lalao Olaimpika ny mpankafy aorian'ny fivontosan'ny aretina COVID-19 any Japon.
Ny filoham-pirenena Tokyo 2020 Seiko Hashimoto dia nifona tamin'ny tompon'ny tapakila ary nilaza ny fameperana ny vahoaka rehetra ho “manenina”, nanao hetsika mahery vaika tamin'ny fiezahana hisorohana onjampeo vaovao eo am-pisondrotan'ny fiakaran'ny Delta tena mifindra.
Ny praiminisitra Yoshihide Suga dia nilazalaza fa tena ilaina io hetsika io, nitahiry ny fifanarahana vita tamin'ny faran'ny volana lasa teo izay mety hahitana fahaiza-manao mahatratra hatramin'ny 50 isan-jato, mahazaka olona maherin'ny 10,000 isaky ny toerana.
Io hevitra io dia nifototra tamin'ny fiheverana fa ny fanaparitahana COVID-19 dia hamafana amin'ny alàlan'ny fanolorana vaksiny efa nandrasana hatry ny ela, ny governemanta sy ny komity mpikarakara ihany no mampihena ny fatrany ho 5,000 ho valin'ny fampitandremana nataon'ny mpitsabo manam-pahaizana fa misy olom-bitsy misolo tena. ny safidiny azo antoka indrindra.
Tokyo dia nitatitra ny isa isan'andro avo indrindra amin'ny COVID-19 hatramin'ny tapaky ny volana mey teo ny alarobia teo, miaraka amin'ny vaovao 920 ny areti-mifindra vaovao izay nampitombo ny tahotra sao hanimba ny toe-javatra ny fahatongavan'ireo atleta sy tompon'arivony an'arivony alohan'ny handinihana ireo mpankafy.
Ny sefon'ny komity olympika iraisam-pirenena (IOC) Thomas Bach dia nanao fivoriana misokatra tamin'ireo solontenam-panjakana eo an-toerana sy nasionaly ary tompon'andraikitra avy amin'ny vondrona efatra, komity mpikarakara ary ny komity paralympika iraisam-pirenena.
"Nasehonay izany andraikitra izany hatramin'ny andro nampihemotra," hoy izy. “Ary hasehontsika izany koa anio.
"Hanohana izay fepetra ilaina rehetra izahay mba hananana Lalao Olaimpika sy Paralaimpika azo antoka sy azo antoka ho an'ny vahoaka Japoney sy ireo mpandray anjara rehetra."
Ny lalao dia kasaina hatao manomboka ny 23 Jolay hatramin'ny 8 Aogositra.